किन यौन गरेपछि अर्को चोटि गर्न मन लाग्छ  ? - IAUA
ramkrishna August 21, 2020	यौन
यौन उत्तेजना र यौ नसम्पर्कको सञ्चालन
यौ न चाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एक विशेषता हो र सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौन चाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि आवश्यक छ । यौन सम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् । मस्तिष्कको ज्थउयतजबबिmगक भन्ने सानो अंगले यौन सम्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता प्राणीमा उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग Cerebral Cortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरूलाई अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ ।
यौन संवेदनशीलता सम्बन्धी कुराहरू पनि यसै भागबाट सञ्चालित हुन्छन् । यौन इच्छालाई प्रभावित पार्ने हर्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्ति ष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराहरूको संयुक्त प्रभावबाट नै यौ नस-म्बन्धी क्रि-याकलापहरू निर्देशित हुन्छन् । यौ नस म्पर्क होस् वा अन्य यौ-न क्रि याकलाप ती वास्तवमा शारी रिक तथा मा नसिक दुवैको समन्वयमा हुने एक जटिल प्रक्रिया हो ।
मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौ ने*च्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एक त इन्डोक्राइन सिस्टमअन्तर्गतका रागरसहरूले सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कोतिर इन्द्रीय प्रणालीका अनि मस्ति ष्कले । ह र्मोनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा Testosterone को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यौ न व्यग्रता वा चा’हना अर्थात Libido हुन यो ह र्मोनको निश्चित मात्रा व्यक्तिमा हुनु आवश्यक छ ।
यौ न उत्ते जनाको सुरुवातदेखि त्यसको अन्त्यसम्मको कुरालाई हेर्दा हाम्रो शरीरमा केही परिवर्तनहरू एक निश्चित प्रकारले भएका देखिन्छन् । सो यौ न उ त्तेजना प्रति हाम्रो शरीरले देखाएको प्रतिक्रया भएर नै यसलाई मानव यौ न प्रति क्रिया चक्र भनिन्छ र अंग्रेजीमा हयुमन से क्सुअल रेस्पोन्स साइकल भनिन्छ । यसका ४ चरणहरू Excite’ment P’hase, Plateau P’hase, Orga’sm Phase tyf Res’olution Phas’e हुन् ।
हामी किन बारम्बार यौ नसम्प-र्क राख्न लालायित हुन्छौं त ?
हामीले मानव यौ न प्रतिक्रिया च-क्रलाई केलाएर हेर्‍यौं भने त्यसमा प्राप्त हुने सुखलाई स्वर्गीय सुख भनिन्छ, त्यसैले यसलाई चर मसुख नै नाम दिइएको छ । भनिन्छ, यो मानवले प्राप्त गर्ने सुखहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम सुख हो । त्यसैले यो स्वाभाविक हो कि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो सुख प्राप्त गर्न लाला’यित हुन्छन् । उसले सो सुख पुन: प्राप्त गरेमा उसले सो सुख फेरि पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ र यसले निरन्तरता पाउँछ ।
यो कसरी सञ्चालित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकपल्ट नियालेर हेरौं । यस्ता प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने पुरस्कार प्रणाली (Reward system) भनिन्छ । यो प्रणालीले हामीलाई सुख वा आ-नन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, नशा लु वस्तुको प्रयोग होस् वा यौ नस-म्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पी डादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ । यस क्रममा हाम्रो म-स्तिष्कको विभिन्न भागबाट हुने कार्यको संयोजनको कार्य भने क्तचष्बतगm भन्ने भागले गर्छ ।
यो प्रक्रियामा Dopamine भनिने Neuro (Transmitter) को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै आनन्ददायी क्रियाकलापभन्दा पहिले जति बढी मात्रामा Dopamine म-स्तिष्कमा निस्कन्छ त्यति नै बढी आ-नन्द प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको केही मात्रामा अनुभव भए पछि, म-स्तिष्कमा स्मृति ( Memory) बन्दछ र यही स्मृतिको आधारमा हामीले केही निश्चित क्रियाकलाप आनन्ददायी हुने अपेक्षा गर्छाैं । हामीले प्राप्त गर्ने आ-नन्द हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा नै हुने यउष्यष्मक को कारणले प्राप्त हुन्छ । Dopamine निस्किए पछि Opioids निस्कन्छन् ।
अब त पक्कै नै बुझ्नु भयो होला कि किन एकपल्ट यौ न स-म्पर्क गरे पछ फेरि–फेरि यौ नस-म्पर्क गर्न मन लाग्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने मस्ति-ष्कको यस्तो पुरस्कार प्रणाली मानवलगायत सबै जसो नै प्राणीमा हुनुले उक्त प्राणीको वंशजलाई निरन्तरता दिन प्रकृति ले नै दिएको वरदान हो भन्न सक्छौं ।
डा. राजेन्द्र भद्रा/साप्ताहिकबाट
१० ग-ल्ती जसले तपाईंलाई जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ !
एजेन्हान देखि बेलुकासम्म कतिपय अवस्थामा हामीले यस्ता ग-ल्ती गरिरहेका हुन्छौँ जसले स्वास्थ्यमा ग’म्भीर अ-सर पारिरहेको हुन्छ । यस्ता सामान्य गल्तीले हाम्रो छालामा प्रभाव पार्दछ जसकारण हामी कम उमेरमै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
यदि हामीले त्यस्ता ग-ल्तीप्रति ध्यान दियौँ भने आफ्नो छालालाई जवान राख्न सक्नेछौँ ।
लगातार त’नाव बढ्ने गर्यो भने हाम्रो शरीरमा त्यस्ता ह-र्मोनहरु उत्पादन हुन्छन् जसले स्वास्थ्यलाई हा’नि पुर्याउँछ र तना’व बढाउँछ । यसका कारणले हाम्रो छालामा समयभन्दा पहिले नै चाउरीपना आउन थाल्छ ।
बिहानको खाजा नखाने मानिसलाई दिनभरि थका-न महसुस हुन्छ । यसले शरीरमा विभिन्न रो-ग पैदा गराउँछ अनि समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
लगातार एकै स्थानमा बसिरहनाले खाना राम्रोसँग नपच्ने सम’स्या हुन्छ । पाचन प्रणालीमा सम’स्या आउने भएपछि मोटोपना देखा पर्छ । यस्तोमा हाम्रो शरीर चाँडै रो-गले ग्र’सित हुन्छ अनि हामी छट्टै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
गाँ’जा, चुरो-ट र ड्र’ग्स जस्ता न’शाको ल-त लागेका मानिसको शरीरमा कार्टिसोल नामक ह’र्मोन बन्न थाल्छन् । यसले त-नाव बढाउँछ र समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिन थाल्छ ।
अनुसन्धानले यो पुष्टी गरिसक्यो कि रातिको समयमा ७ घन्टा सुतेन भने यसले त’नाव, हृदय सम्बन्धी रो’ग र र’क्तचापमा सम’स्या पैदा गराउँछ । यस्तो ग-ल्तीले जवानीमै मानिसलाई बूढो बनाइदिन्छ ।
हाम्रो शरीरलाई पर्याप्त पोषण दिने दूध, पनिर, हरियो सागसब्जी, अन्डा, माछा, मासु जस्ता खानेकुरा अत्यन्तै आवश्यक छन् । दैनिक खाने कुराहरुमा यी खानेकुरा पनि सेवन गर्नुपर्छ । किनकी जरुरी पोषण नपाउँदा शरीर चाँडै क-मजोर भएर बूढो देखिन थाल्छ ।
नियमित बिहान व्यायाम नगर्ने मानिसको शरीर फिट र स्वस्थ हुन सक्दैन । यस्तोमा मोटोपना, कब्जि’यत, एसि-डीटी जस्ता समस्या देखा पर्छन् जसले विभिन्न रो’गलाई निम्त्याउँछ । समयभन्दा पहिले नै बूढो देखिनबाट बच्नका लागि व्यायाम अत्यावश्यक मानिन्छ ।
Previous Previous post: आमिर खानकी छोरी इराको ‘बोल्ड’ अवतार
Next Next post: भारतीय नायिका आलिया भट्टका हट तस्बिर